देउवा पक्षकै नेविसंघमा दुई चिरा, कोही देउवा समाउँदै कोही आरजु रिझाउँदै – YesKathmandu.com
देउवा पक्षकै नेविसंघमा दुई चिरा, कोही देउवा समाउँदै कोही आरजु रिझाउँदै
मङ्गलबार १४, असार २०७३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भात्रृ संगठन नेपाल बिद्यार्थी संघको महाधिबेशन मिति जति नजिक आउँदैछ, त्यति नै नेतृत्वको होडबाजी कसिलो बन्दै गएको छ । नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न पौडेल पक्षका बिद्यार्थी नेता भन्दा देउवा पक्षकै दुई समुह बढि सक्रिय देखिएका छन् ।
बिद्यार्थी नेता नैनसिंह महर र शुभराम बस्नेत देउवालाई रिजाएर अध्यक्ष बन्न लागि परेका छन् भने जितजंग बस्नेत देउवा पत्नी आरजुको फेरो समातेका छन् ।
महर र बस्नेतबीच जो अध्यक्ष भएपनि स्वीकार गर्ने पक्षमा छन । यी दुई देउवाभित्रका एउटै खेमामा छन् । देउवा क्याम्पमा बिद्यार्थीका दुई समुह छन् । एउटको समुहको नेतृत्व नैनसिंह र शुभरामले गरेका छन् भने अर्काे पक्षको नेतृत्व जितजंग बस्नेतले गरेका छन् । दुवै पक्ष देउवा क्याम्पबाट आधिकारिक उम्मेद्धार बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
केही बिद्यार्थी नेताहरुले भने नेताको घरमा धाउने भन्दा कामको मुल्याङकन गरी टिकट दिन नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शंकरदेव क्याम्पसदेखि स्ववियू परिषदसम्म चर्चित काम गरेका शुभराम कामका आधारमा नेतृत्वले मुल्याङकन गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘नेविसंघमा तीन कार्यकाल काम गरेका साथी भन्दा स्ववियूबाट मैले गरेको कामको मुल्याङक गर्न मैले नेताहरुलाई आग्रह गरेको छु,’ शुभराम बस्नेतले भने ‘नेताको दैलो चाहर्ने भन्दा काममा ध्यान दिनेलाई पार्टीले मुल्याडकन गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ शुभराम बस्नेतको पक्षमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु खुमबहादुर खड्का, डा. प्रकाशशरण महत देखिएका छन् । उनीहरु महर र शुभराम मध्ये एकलाई बनाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसैगरी देउवा पक्षमै अर्काे खेमा पनि छ । जितजंग बस्नेत नेतृत्व खेमाले पनि अध्यक्ष लगाएतका पदहरुमा दावी गरिरहेको छ । जितजंग बस्नेत अध्यक्षका लागि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका छन् । जितजंगका पक्षमा देउवा पत्नी आरजु देखा परेकी छिन् । देउवा क्याम्पमै दुवै पक्षबीच कडा टक्कर देखिएको छ । दुवै पक्ष पद आफ्नो हातमा पार्न लागि परेका छन् ।
उता पौडेल पक्ष भने मनोजमणि आचार्यलाई अध्यक्ष बनाउने तयारीमा जुटेको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि बिद्यार्थी नेताहरु सहमत नभएपछि पौडेल पक्षले आचार्यलाई अगाडी सारेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने:- जननेता मदन भण्डारी देशभक्त नायक
पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै मानव तस्करमा !
महामन्त्रीमा सशांक र कोषाध्यक्षमा सीतादेवी अग्रता
जुम्लामा अनिश्चितकालिन कर्फ्यू, आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर
नेपाल सद्भावना पार्टी द्वारा असन्तुष्टि व्यक्त
भन्सारमा रोकिएका ट्यांकरहरु भारतले छोड्यो
गृहमन्त्री निधिको सनसनीपूर्ण खुलासा,वैशाख ३१ मा निर्वाचन नहुने संकेत
मलाई सुशील दाले काठमाडौं बोलाउनु भयो तर पहिलै जानु भयो
देउवामाथि पौडेलको आरोप – पार्टीलाई उठ्नै गाह्रो हुने गरी लथालिंग बनाउनु भयो
हङकङले दियो नेपाललाई १५४ रनको लक्ष्य, संदिपले लिए तीन विकेट
पुल र बस्ती संरक्षणमा चार करोड २५ लाख खर्च लाग्ने